ကြိမ်နှုန်း ဇာတ်ကားကြီး Red Carpet Show ကို အနက်ရောင် Dress လေးနဲ့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ - TheeSayChin
ခိုင်နှင်းဝေ က အနက်ရောင် Dress လေးနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ” SY Film Production မှ ထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးတဲ့ ကြိမ်နှုန်း – Frequency ဇာတ်ကားကြီး Red Carpet Show ပွဲလေး တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိတဲ့ကားလေး ဖြစ်ပါစေရှင် ❤” ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေ ရဲ့ ပွဲတက် ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ပရိသတ်တွေသဘောကျလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရူပေးကြတဲ့ မိုမိုလေးပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။ Moekalay Source;khine hnin wai
← Wisdom Hill ကျောင်းအုပ်ရဲ.အမဖြစ်သူ ဒေါ်သီရိမေရဲ. တရားဝင် ဖြေရှင်းချက်….
‘ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် ပိုးမမှီသာကို သရုပ်ဆောင်သင်ပေးနေတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု →
တကယ့် အနုပညာ တွေနဲ့ တင်ဆက်ဖျော်ဖြေသွားမှာပါဆိုတဲ့ ညီဘွားညီ
Line Walker2ရိုက်ကွင်းကနေ ဒါရိုက်တာမသိအောင် ကျည်ဆံတစ်တောင့် ယူထားလိုက်တဲ့ နေထက်လင်း